ဗဟုသုတအစုံ Archives - Apannpyay
Home > Uncategorized > ဗဟုသုတအစုံ
လူတွေပြောနေကြတဲ့ ဖိုးတခေတ် ဘာလုပ်နေသလဲ လူတွေပြောနေကြတဲ့ ဖိုးတခေတ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေးစားမိပါတယ် ခုကြည့်လေ အရင်တုန်းကနာမည်သာကြားဖူးတယ် ဆံတော်ရှင်... Read More
ဓားပြလူဆိုးကြီးဘ၀ မှ အမြင့်ဆုံးနေရာကိုတက်လှမ်းခဲ့သူ (သို့) သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ရှင်ဥက္ကဌရဲ့ဘ၀ဖြစ်စဉ် ကျေးဇူးတော်ရှင် သဲအင်းဂူ ဆရာတော် အလောင်း... Read More
“မြွေပွေးမြွေဟောက် ကိုက်ခံရပါက ကြောက်စရာမလို”
“မြွေပွေးမြွေဟောက်ကိုက်ခံရပါက ကြောက်စရာမလို” သက်စောင်သမားတော်ဂျာနယ် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့ကို အသက်သေသည်အထိ အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော ကိုက်တတ်သည့်မြွေများအနက်အများဆုံးမှာ မြွေပွေးမြွေဟောက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုမြွေပွေးမြွေဟောက်အကိုက်ခံရသည်မှာလည်း... Read More
၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွက် မြန်မာ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် (၁၀) ဦး
ကမ္ဘာ့ကျော် Ranking Organization, Forbes က ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင် ၁၀... Read More
မြန်မာ တနိုင်ငံလုံုးံမှာသျောင်ပေစူး အများဆုံးရွာ အခုမှပဲ အတိအကျသိရတယ်
မြန်မာ တနိုင်ငံလုံုးံမှာသျောင်ပေစူး အများဆုံးရွာ မကွေးတိုင်း မင်းဘူးခရိုင် ပွင့်ဖြူမြို.နယ် ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာ သူတို့ေ​လးတွေ သွားခဲ့​တဲ့​နေရာတိုင်းမှာလူတိုင်းနီးပါး ​ပြောတဲ့စကားတစ်​ခွန်းရှိတယ်​ကျက်​သ​ရေရှိလိုက်​တာ... Read More
နှာခေါင်းကို အသက်ရှူဖို့ မသုံးတဲ့ ကမ္ဘာ့ဆန်းကျယ်ဆုံး လူမျိုး
နှာခေါင်းကို အသက်ရှူဖို့ မသုံးတဲ့ ကမ္ဘာ့ဆန်းကျယ်ဆုံး လူမျိုး #အပါတနီ( အာရှရဲ့ရှေးအကျဆုံးလူမျိုးစု၁၀စုထဲပါဝင်သော မြန်မာ့နယ်နိမိတ်အစွန်မှလူမျိုးတစ်စု(သို့ ) ကမ္ဘာ့အဆန်းကြယ်ဆုံးသက်ရှိလူမျိုးအဖြစ်သင်မှတ်ခြင်းခံထားရသောလူမျိုးစုများထဲမှတစု... Read More
နိုင်ငံအတွက် ကျနော် မြက်တပင်တောင်မစိုက်ပေးခဲ့သေးပါဘူး ကျနော့အဖေရဲ့သမိုင်းကိုပါ ထိခိုက်သွားစေမဲ့ ?
နိုင်ငံအတွက် ကျနော် မြက်တပင်တောင်မစိုက်ပေးခဲ့သေးပါဘူး ကျနော့အဖေရဲ့သမိုင်းကိုပါ ထိခိုက်သွားစေမဲ့ ? ကို အောင်ဆန်းဦးနဲ့ ပါတ်သက်လို့ မေးလာတဲ့သူတွေ... Read More
ဒါဟာ….တိုက်ဆိုင်မှူ့မဟုတ်ပါဘူး ဗျာ… တိုက်ဆိုင်မှု့မဟုတ်ပါ ဘုရားတဆူတဆူပေါ်ထွက်ဖို့လေးသင်္ချေ... Read More